Kooxda Bordeaux oo la saxiixatay weeraryahankii AC Milan ee Jeremy Menez… (Goorma ayaa saxaafadda loo soo bandhigayaa?) – Gool FM
Kooxda Bordeaux oo la saxiixatay weeraryahankii AC Milan ee Jeremy Menez… (Goorma ayaa saxaafadda loo soo bandhigayaa?)
Haaruun August 1, 2016
(Bordeaux) 01 Agoosto 2016 – Kooxda kubadda cagta Bordeaux ee ka dhisan Faransiiska ayaa xaqiijisay inay heshiis la gaartay weeraryahankii AC Milan ee Jeremy Menez, isla markaana uu ku soo biirayo Nouveau Stade de Bordeaux.
Weeraryahankan reer France, kaasoo u dhaqaaqay Rossoneri sanadkii 2014 ayaa ku soo gebagabeeyey xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey isagoo haya gooldhalinta, waxaana uu dhaliyey 16 gool 34 kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.
Hase yeeshee, dhaawacyo hareeyey ayaa u horseeday inuu kaliya 10 kulan ciyaaro horyaalka Serie A kooxda San Saro xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana kooxda Bordeaux ay shaacisay inuu gelinka dambe ee maanta la soo bandhigi doono.
“FC Girondins de Bordeaux waxa ay AC Milan heshiis kala gaartay Jeremy Menez,” ayuu u aqrismayey bayaan ay kooxdu soo dhigtay website-keeda rasmi ah.
“Waxaa harsan inuu tijaabada caafimaad maro, waxaana xiddiga xulka qaranka France uu u saxiixi doonaa Les Girondins, ka hor inta aan galinka dambe ee Isniinta saxaafadda loogu soo badhigin Château du Haillan.”
29-sano jirkaan ayaa 24 kulan u saftay xulka Les Bleus lagu naanayso.
Calanwade 18 bilood la ganaaxay
Inqilaabkii dhicisoobay ee Dalka Turkiga oo dhaawacay Kubadda Cagta dalkaasi